Ganacsi - 7 Maalgashiyo Faa'iido Leh
Ganacsiga - 7 Maalgashiyo Faa'iido Leh
Posted by Tranquillus | Juun 29, 2021 | Shabakada
Waad salaaman tahay magacaygu waa Eliot, waxaan noqon doonaa tababarahaaga inta lagu guda jiro koorsadan. Tababarkan, waxaan ku siinayaa Talooyin dhawr ah oo wax badan kaa caawin doona. Waxaan ku siinayaa 7 maalgashi oo aad kaga ganacsan karto Ganacsiga.
Waxaan doonayay inaan sameeyo tababar gaaban oo gaagaaban, laakiin waa lafiigay. Taasi waa in la yiraahdo waxaad ku keydin doontaa aqoon badan muddo gaaban. Si aad si dhakhso leh u bilaabi karto xirfaddaada ganacsi. Intaas waxaa sii dheer, tababarkan gabi ahaanba waa bilaash ee ka faa'iideyso.
Inta lagu guda jiro tababarkan waxaad yeelan doontaa su'aalo kooban, waxay kuu oggolaaneysaa inaad naftaada dejiso horumarkaaga. Haddii aadan dhaafi doonin imtixaankan, waxaan kugula talinayaa inaad daawato tababarka markale.
Barxadda ganacsiga ee loo adeegsaday tababarkan waa E-Toro, maxaa yeelay way fududahay in la galo oo aad u macquul ah. Waxaan bilaabay ganacsi ku saabsan mana aanan niyad jabin. Waxaad sidoo kale aadi kartaa goobaha kale. Waqtigan xaadirka ah, waxaan isticmaalaa Suuqyada Admiral MT4, waa madal wanaagsan, laakiin si kastaba ha noqotee way ka dhib badan tahay in wax la barto. Adigaa iska leh, waxay kuxirantahay dhadhankaaga iyo dareenkaaga ...
Ganacsiga - 7 Maalgashiyo Faa'iido Leh Oktoobar 15th, 2021Tranquillus
READ Kafiican isku muuji naftaada Faransiiska (goobta iskuulka).
horeSida loo sameeyo qaansheegad aan lagaran karin
socdaKa iibso dhirtaada ugu horreysa Coinbase
Fasaxa jirada ee la fududeeyay: waxaad ku soo diri kartaa dukumiintiyada taageeraya emayl
Hab-maamuuska caafimaadka ee shaqada: waa maxay isbeddellada laga bilaabo Febraayo 16, 2022?
Koontada tababarka shaqsiga: kaalmada maaliyadeed ee tababarka dhijitaalka ah
Hordhac Power BI Desktop